Madaxwayne Kuxigeenka Mareykan ka Oo Dib U Dhigay Safarkiisii Bariga Dhexe | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Madaxwayne Kuxigeenka Mareykan ka Oo Dib U Dhigay Safarkiisii Bariga Dhexe
Madaxwayne Kuxigeenka Mareykan ka Oo Dib U Dhigay Safarkiisii Bariga Dhexe
Iyadoo dhawaan markii Donald Trump uu jeedinayay khudbadda uu ugu aqoonsaday in Qudus ay tahay caasimadda Yahuuuda, uu ballanqaaday in ku xigeenkiisa uu booqasho ku mari doono wadamada bariga dhexe, ayaa hadda Maraykanku wuxuu ka laabtay go’aankaas.
Aqalka Cad ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay In Penis uu dib u dhigtay booqasho uu ku tagi lahaa dhulka Yahuuda ay xooga ku heysato iyo dalka Masar, sababo la xiriira codeyn dhawaan uu sameyn doono aqalka Congreska oo la xiriirta arimaha canshuurta.
Aqalka cad wuxuu si cad u beeniyay in dib dhigista safarkan uu la xiriira waxyaabaha ka dhashey go’aankii Donald Trump uu ugu aqoonsaday Qudus caasimadda Yahuudda, uuna ku sheegay in safaaradooda Talla’biib laga soo rari doono lana keeni doono magaalada Al-Qudus.
Waxay u badantahay in loo baqay amaanka Penis, maadaama caalamka Islaamka ay ka jirto xaalad feejignaan ah, islamarkaana dadka muslimiinta ahi aad u careysanyihiin.
Dhawaan golaha amaanka ayaa meel mariyay hindise ay soo jeedisay Masar, kaas oo ka hor imaanaya in Qudus ay noqoto caasimadda Israa’iil, balse waxaa codka Vitow powerka kala horyimid dowladda Maraykanka.